American Golden Retriever: Nke a bụ Goldie kacha mma maka gị? - Dịrị
Golden Retrievers anaghị achọkarị mmeghe pụrụ iche. Ha bụ otu n'ime ụdị nkịta kachasị ewu ewu - ọ bụghị naanị na US, mana n'ụwa!
Ha bụ ezigbo anụ ụlọ ezinụlọ na-ahapụ ụzọ ụkwụ nke ike dị mma ebe ọ bụla ha na-aga.
Kpoo American Golden Retriever
Ma ị maara na e nwere ụdị Goldies atọ? Anyị ‘’ kwuru banyere ha niile, mana ka anyị lekwasị anya n’ihe na-eme ka American Golden Retriever pụta ìhè.
Kedu ihe bụ American Golden Retriever?
Kedu ihe American Golden Retriever dị ka ya?
Okpu: American Golden Retriever dị ka anụ ụlọ
Ilekọta American Golden Retriever
Chọta ụmụ nkịta American Golden Retriever maka ọrịre
Uzo di iche iche di ka American na English Golden Retriever
Ikwesiri inweta American Golden Retriever?
The American Golden Retriever bụ otu n'ime ọdịiche nke ụdị a, mana ha bụ otu ihe ahụ na ihe ọ bụla dị ọcha Goldie .
Ka anyị tụlee ntakịrị banyere mmalite nkịta a. Nwere ike ịchọta akụkọ ihe mere eme nke Ntughari ọla edo laghachi n'etiti narị afọ nke 19 nke Scotland ebe a na-eji ha achụ nta ma weghachite mmiri mmiri.
Bredị ịchụ nta a nwere ọgụgụ isi mechara gaa North America na kọntinent ndị ọzọ, na-aga n'ihu na-ewu ewu. Taa, ha bụ ụdị nke atọ a kacha mara amara na United States ma nọrọ n'ọkwa 8th na UK.
Ndị mmadụ na-asọpụrụ Goldens maka ọgụgụ isi na ụzọ dị ụtọ , nke mere ka ha nwee ihe ịga nke ọma na ọrụ ndị ọzọ dị ka nchọpụta, nchọta & nnapụta, na nkịta enyemaka nkwarụ.
Tydị: English Golden Retriever VS. Onye Nweta Ọlaedo nke America
Kpoo White Golden Retriever
Ndi mbu mara ndi Goldens Kenlọ Ọrụ Kennel nke Britain (KC) na 1913 na site na American Kennel Club (AKC) na 1932. Bkpụrụ izu maka otu klọb amalitela ịgbanwe ihe masịrị ndị nwe nkịta na mpaghara ma ọ bụ obodo ha.
Kacha nkịtị Golden Retriever variant tụnyere American Goldens bụ Goldies na Europe, na-akpọkwa Bekee ude Golden agbapụta .
Dị ka kwa United Kennel Club (UKC) ụdị ọkọlọtọ maka English Goldens, ha nwere nkpumkpu ma wavier ntutu na abata na ude nke ude , ebe ụfọdụ dị ka ha nwere uwe ọcha na-acha edo edo.
Ha nwere okpu sara mbara ma saa mbara, yiri isi na nti nwere ogo ha.
A bịa n'omume, a ga-amata ụdị bekee dị iche iche dị jụụ na ụzọ dị mfe ịzụ .
Maka ahụike, ọ bụ ezie na ụdị ọla edo abụọ a na-arịa ọrịa yiri ya, English Goldens nwere ike ịnụ ụtọ ndụ ha niile, nke bụ afọ iri na abụọ.
Anyi choro ime ka o doo anya na agbanyeghi ebe anuru ha, ulo mkporo na-akpo ha niile dika “Golden Retrievers.”
Ndi American Goldens nwekwara okpokoro isi sara mbara ma di nkpa. Ha nwere ntị di nkpuru na nkpuru ha dabara adaba nke nwere anya nkpuru obi di ukwu na ukwu. Na nsọtụ nke ọzọ nke ahụ ha bụ ọdụ dị ntakịrị curved.
Na AKC ụdị ọkọlọtọ na-akọwa ụcha uwe ha dị ka “ọlaedo mara mma, na-egbuke egbuke nke nwere ụdị dị iche iche.” A na-ewere Goldie ọ bụla nwere aji nke nwere oke ọkụ ma ọ bụ oke ọchịchịrị ka ọ bụ mmejọ ma ọ bụ amataghị ya .
Typesdị niile nwere a soft undercoat na mmiri na-eguzogide na-ok topcoat . Tụnyere ndị ọzọ ụdị, ha nwere straighter nku na thicker uwe.
Akụkụ ụfọdụ nke ahụ ha, dịka olu, apata ụkwụ, na ọdụ, nwere ibu nku ma ọ bụghị ogologo oge . Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ isonye na nkịta na-egosi, ọdịdị okike bụ ụzọ kachasị mma ịga.
Kedu otu nnukwu ndị agbapụta ọla edo America ji enweta?
The American Golden Retriever guzo n'ebe ọ bụla 21.5 ruo 24 sentimita asatọ (55 ka 61 cm) n'ogologo ma tụọ n'etiti 55 na 75 pound (25 ka 34 n'arọ). Mamụ nwanyị na-adịkarị obere karịa ụmụ nwoke.
Ọ bụ ezie na ha maara ihe ma nwee ezigbo ọzụzụ, Golden Retrievers ka a na-azụ iji na-agagharị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ike ibi n'ụlọ naanị nke ọma, anyị na-akwado ha n'ụlọ nwere nchebe echekwara, saa mbara ebe ha nwere ike ịgba ọsọ ma kpọọ egwu mgbe ọ bụla ha chọrọ.
All Golden Retrievers bụ enyi na enyi, na-eguzosi ike n’ihe, nwee ọgụgụ isi, ma na-esokwa ụmụaka eme nke ọma . Otu njirimara nke ga - eme ka ọdịiche ndị America pụta bụ ọkwa ike ha. Ha bụ naanị nnukwu bọọlụ egwuregwu nke na-arụsi ọrụ ike na egwuregwu.
Ikpokọta niile na ha siri ike ịchụ nta mmuo, ị ga-enweta nkịta na-adịghị agwụ ike .
Ebe ọ bụ na ha nwere mmasị ịbụ akụkụ nke ọrụ ezinụlọ kwa ụbọchị, ọ dịghị mma ịhapụ pooch enyi a maka ogologo oge n'ihi na ha na-enwekarị nchegbu nkewa .
Ọ bụrụ na ha nwere nkụda mmụọ ma gwụ ha ike, tụrụ anya na anụ ụlọ na-aga site na mmụọ ịda mba, na-ebibi.
Want chọrọ ịhụ ka ọ dị ka inwe Goldie onye America? Lelee vidio a na-atọ ọchị:
Ndi American Golden Retrievers na-agba ụja nke ukwuu?
Bredị a bụ na-adịkarị jụụ ma na-agbọ ụja mgbe ụfọdụ . Mana ọ bụrụ na ị chọpụta na Golden Retriever ịgbọ ụja, ịkwa ákwá, ma ọ bụ ịta nri ụlọ, ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke nchedo nkewa.
O yikarịrị ka ọ kachasị mma na fido a na-ebi n'ụlọ ebe ha nwere enyi canine, ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ ka ha na ha nọrọ. Inwe pal furry na-egwu egwu nwekwara ike inyere aka ịnagide ume Goldie gị.
Anyị nwere ike ịtụle Golden Retrievers ka ọ bụrụ obere mmezi ebe ọ bụ na ha chọrọ nchapu oge ụfọdụ.
Fọdụ na-ekwu na ha bụ ìgwè mmezi dị elu n'ihi nha ha na oke ntutu ha, ha na-awụkwa ọtụtụ. Ma gịnị bụ nlekọta nlekọta ya?
Ndi ịkpụ afụma ọla edo edo edo nwere na enyere aka n'ịwụfu?
No, ọ bụghị, ya mere NOT SHAVE your Golden Retriever. Ekwesighi ịgha ntutu ọ bụla nwere okpukpu abụọ ma ọ gwụla ma ọ bụ njedebe ikpeazụ n'ihi ahụike ha ma ọ bụ ọnọdụ ntutu dị njọ n'ezie.
Nke ahụ akwa kootu na enyere ha aka ichikota okpomoku ha ma chebe akpukpo aru ha site na onodu onodu ihu igwe di iche .
Site na ịchapu ntutu ha mara mma, ị na-ebibi mkpuchi nke okike ha ga-emebi, ọ bụghị naanị na ajị anụ ha kamakwa akpụkpọ ahụ na ahụ ike ha.
Imebi ntutu nke ntutu nwekwara ike ịpụta na uwe ha nwere ike ghara ito eto ọzọ.
Inwe onye nwe ọla edo pụtara na ị maara oge na nlebara anya ha ga-achọ . Na-elekọta uwe nkịta gị na-ehicha ya kwa ụbọchị , na maka iji aka edozi ọkachamara, weta ya onye na-edozi edozi kwa ọnwa abụọ.
Kwadebe onwe gị na brushes kachasị mma maka ndị na-ewe ọla edo, dịka ụlọ ọrụ ahịhịa ahịhịa , ka Greyhound mbo , na a de-awụfu zaa .
Kedu otu mmega ahụ ndị America Golden Retrievers chọrọ?
American Golden Retrievers bụ ihe ọ bụla ma ọ dị umengwụ, yabụ otu awa ma ọ bụ abụọ nke mmega ahụ kwa ụbọchị ga-ezu .
Enwere okwu na 'nkịta ike gwụrụ bụ nkịta obi ụtọ,' mana ekwesighi ikwubiga okwu ókè na nwa nkita gi iji zere itinye nrụgide na ọkpụkpụ ha na nkwonkwo ha na-amalitebeghị nke ọma.
Ime nke a nwere ike iduga na nsogbu ije, ma emechaa, hip dysplasia.
Ewezuga mmega ahụ, oge igwu egwu, na ọzụzụ, nye gị ihe omume ga - abụ ihe na - akpali nkịta gị. Ọ nwere ike ịdị nfe dịka ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ a egwuregwu ụmụaka - ihe obula nke g’eme ka ya chee echiche.
Nri akwadoro maka American Goldie
American Golden Retrievers bụ incredibly ibu-enwe mmetụta ọsọ ọsọ , yabụ ewezuga ịrapara nri, gbaa mbọ hụ na ụdị nri ị na-eri na nkịta ọ na-enye anụ ụlọ ya dabere n'ọkwa ọrụ ya, afọ ndụ ya, na ogo ya.
Goldies tozuru etozu kwesịrị iri nri ihe dị ka iko 2 ruo 3,5 kwa ụbọchị . Zere ntụziaka ndị nwere nnukwu kalori n'ihi na ha nwere ike ime ka Goldens too oke ọsọ ọsọ, nke na-adịghị mma maka mmepe ọkpụkpụ ha.
Iji nyere gị aka ịhọrọ akara nkịta kacha mma maka Golden Retriever gị, anyị nwere isiokwu nke ahụ nwere ike inyere gị aka.
Ogologo oge ole ka ndị American Golden Retrievers na-adị ndụ?
American Goldies nwere obere ndụ dị mkpụmkpụ karịa English Cream Golden Retrievers. Ogologo ndụ nke American Golden bụ afọ 10 na ọnwa 8, ebe onye ibe Britain na-adịkarị ndụ ruo afọ 12 na ọnwa 3.
Enwere ọmụmụ ihe nke Golden Retriever Club of America mere na 1998. Ha chọpụtara na ihe dịka 60% nke ndị Golden Golden Retrievers nke America na-anwụ site na ọrịa kansa ma e jiri ya tụnyere naanị 39% nke English Golden Retrievers.
Ewezuga ọrịa kansa na n'agbanyeghị ụdị ya, American Goldens na-ekerịta nsogbu ahụike, dịka hip na ikiaka dysplasia, Gastric Dilation-Volvulus, yana nsogbu anya na thyroid.
An American Golden Retriever nwa nkita nwere ike ịdị ọnụ site na $ 500 ruo $ 2500 , dabere na ebe onye na-azụ ya, ewu ewu ụlọ ụlọ, yana ọbara nne na nna.
Ezigbo onye na-azụ ihe agaghị egbu oge igosi gị asambodo ahụike na akwụkwọ ọ bụla ga - enyere gị aka ịmata onye nwere ike pup.
Ha agaghịkwa erere onye ọ bụla. Ndị na-azụ atụrụ na-elekọta nkịta ha nwere ike ijide n'aka na onye na-azụ ihe bụ egwuregwu kwesịrị ekwesị maka nwa ha.
Ndị na-eme ihe nkiri American Golden Retriever
Ọ dị mfe ịchọta purebreds n'ịntanetị karịa nkịta ndị na-emepụta ihe, nke bụ ihe dị mma, ọkachasị ebe ọ bụ na Golden Regriever edebanyere aha na mkpakọrịta ziri ezi.
Ndị a bụ ụfọdụ weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ị chere na ị dị njikere maka American Golden Retriever nke gị:
Ndị ewepụtara ọla edo edo edo (Moorpark, CA)
Tsillan Goldens (Ọdọ Mmiri Chelan, WA)
Ogwe SunGolden (Longview, CT)
American Golden Retriever napụtara
Ọ bụghị naanị na nkuchi bụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa iji nweta nkịta nkịta ọ bụla ma ọ bụ anụ ụlọ ịchọrọ, mana ọ bụkwa ụzọ kachasị mma iji nye pooch ohere ọzọ na ịhụnanya na ụlọ.
Ọ bụrụ na ị dị njikere imeghe obi gị nye onye ochie Golden Retriever ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ n'ime ngwakọta ya, lelee saịtị nnapụta ndị a:
Ndị na - ewepụta ọla edo dị na mkpa nnapụta (Cleveland, OH)
Mgbapụta ọla edo ọla edo nke Mid-Florida Ugochi Achara
Yankee Golden Retriever Nnapụta, Inc. (Hudson, MA)
Mgbapụta ọla edo nke Wisconsin (West Allis, WI)
Na-eche ihe ụdị azụ azụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ? Eleghi anya nkịta nke yiri Goldies?
Canines ndị a nwere myirịta na American Golden Retrievers na ụdị ndị ọzọ nke Goldens, mana ha nwere ihe pụrụ iche gbasara ha, kwa.
Chesapeake Bay nweta
Nova Scotia Duck Na-ewepụta Ntugharị
Onye na-egwu egwu American Golden Retriever
American Goldens na-eme ka ezigbo anu ulo ọ bụrụ na etinyere ezinụlọ kwesịrị ekwesị.
Ha choro onye nwe ha nwere ike ijide nke ha okike ma na-egwuri egwu , na onye na-agaghị ahapụ ha ruo ogologo oge naanị.
Ọ bụrụ na ị nwere obere ụmụaka, Golden Retrievers ga-eme ka ụmụnne ndị okenye tọrọ anya , ya mere nke ahụ kwesịrị ịgwa gị ihe.
I kwesịkwara ịdị njikere ịnagide ihe ndị a ndị na-agbahapụ ama ama . Inwe oria a nwere ike ghara isi ike, mana pooch ọ bụla nwere oke a enweghị ike ịdị mfe ilekọta.
You nwere ike iji anya nke uche gị nweta American Golden Retriever? Kesaa echiche gị na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
kedu ihe nkịta na -ebe akwa na ihe ụmụaka ji egwuri egwu
ọkara nwa lab ọkara onye ọzụzụ atụrụ German
ọla edo retriever agwakọta na ụlọ nyocha ojii